China YIYUN Yakakwira Chiuno Snug Tummy Kudzora Bhatani Lifter Shapewear yeVakadzi Vanovhiringidzika Waist Shaper Panties yeVakadzi fekitori uye vanopa zvinhu | Yiyun
Kufema, Eco-Inoshamwaridzana, Kuwedzera Kukura, Kurumidza Kunyema, Eco-Shamwari, Kufema, Zvimwe
Tummy control inocheka muviri
ganda / dema
Saizi rimwe chete saizi:
Kurera uremu hwese:
Iyo yekunze chikamu chakafukidzwa mumabhokisi akasimbiswa
Izvo zvirevo zvemabhokisi akasiyana ehuwandu hwakasiyana hwezvigadzirwa zvakare zvakasiyana
Zvakare zvinogona kuita kuti kutakura kurongedza kurongedza zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi
Yakagadzirwa nePamusoro-Mhando Yezvinhu
Izvo zvigadzirwa hazvina-allergenic, zvinofema, zvakapfava, uye zvakasununguka kupfeka zuva rese pasina nyaya. Dhizaini yepamusoro inopa izvi chiuno chakatemwa chimiro chekupfeka zvinoshamisa kusimba, yakavakwa kusvika makore apfuura
Tora Mufananidzo Wakakwana
Hazvina mhosva kuti ndeipi kureba, uremu kana kuomarara, Iyo Curvy Shaper yakagadzirwa nechinangwa chimwe: Unganidza tekinoroji yepamusoro uye zvigadzirwa kuti uite kuti utaridzike semudiki uye uchitsvedza.
Isu tinopa iwo mavara Iwo matema uye Beige, kuti muvezi arege kuoneka pasi pehembe dzako. Iyo yakaonda asi yakasimba, saka zvisinei kuti wakapfeka zvipfeko zvakadii, iwe chete uchazoziva zviri pasi.
Viga mafuta zviri nyore, pasina kuedza kwe makore kumitambo yekudyisa uye yekudya inodzivirira. Pfeka izvi uye uve wakasununguka uye chivimbo mune chero chipfeko chaunenge wakapfeka. Dhizaini yedu yakabvumidza iwe kuvanza mafuta asingadi uye slim pasi chero chiitiko.
Sarudza chipfeko chako
Tora zviyero zvako, zvinyoro zviyero muchiuno, ipapo kuyera chiuno chako.
Inotaridzika yakakura, snugs zuva rese.
Ndokumbira utarise kune yedu saizi chati nekuchenjera kusarudza saizi yakakodzera
usati watenga chinhu icho, chingave chakasiyana zvakasiyana neyako
renzvimbo yakakura chati.Usataure kuhukuru chati.
Kungobata mawoko chete, Hapana Iron / Hapana Muchina Kugeza / Hapana Chlorine inoruma / Kwete
Firm Tummy Kudzora Muviri Sharper:
Anti-inotsvedza glue dhizaini pachiuno.No kutwasanudza, akareba zvakakwana kuti afukidze dumbu rako repazasi uye risinganyatsoonekwe pasi pehembe dzako.
Kuwedzerwa rutsigiro munzvimbo yako yedumbu .The chiuno chakakwirira chimiro chekupfeka muviri chakagadzirwa mune yakakwirira yakarongeka yekuumbwa mapepa machira inopa chaiyo kukakamira muchiuno chako, ichidzora tummy yako uye kudzikisa chiuno chako, yakanyanya kunonoka uye yakanyorova, hapana kunzwa kwekudzora.Iri muviri unopinza. gadzira rako remukati mumuviri curve kuratidza kuvimba kwako.
The Slimming Butt lifter ine yakangwara dhizaini, inosiya nzvimbo yebeche rako uye yakatsvedza muhudyu zvinobudirira, haina kumanikidza muhudyu uye ichapa yakazara kuvharidzirwa kune butt.This butt lifter shaping briefs panties, ne 3D-chiuno magadzirirwo anovandudza buttock droop flat mamiriro, kukubatsira iwe kuvaka peach chiuno, kubatsira bhurugwa rako rinotaridzika uye rakakura.
Iko kusanganiswa kwe 85 muzana nylon uye 15percent spandex inoita tummy kutonga chimiro chekupfeka zvinyoro-nyoro paganda rako.
Ichi chisina Mupendero Lingerie yevakadzi chisingaoneki musono dhizaini, Iyo isingaoneki pasi pemhando ipi neipi yezvokupfeka. inogona kupfekedzwa mune chero chipfeko chaunoda.
Iwe unogona kuupfeka mumaawa makumi maviri nemana, iyo yakapusa, ine moyo wakanaka uye fashoni, pamwe nehuremu uye yakapfava. 100% machira ekotoni, ane hutano, anofema uye akasununguka kupfeka.
Izvo zvisingaonekwe zvachose, Ultra-nyoro uye yakafarikana.
Yiwu Yiyun Clothing Co, Ltd iri kuda kupa mupiro mukuvakwa kwemusika wepasi rese uye nekupa zviri nyore uye kugutsikana kwevatengi nezvigadzirwa zvedu zvemhando yepamusoro uye masevhisi. Negumi chekutora win-win kubatana uye kubatsirana, tinonzwisisa kuti kushandira pamwe uye kubvumirana kuchaita kuti kutengeserana kuve nyore uye kuve kwakanyanya kushanda. Naizvozvo, isu tine shungu dzekuvaka musika wekubatsira uye kukunda-win musika pamwe neshamwari dzepasi rese.
Yepfuura: Imwe yeanopisa yeBra Hook s - Vakadzi Elastic Bra Vanowedzera Hwemhando yepamusoro Stretchy Metal Bra Buckles Underwear accessories zveBra Back Kuvhara Tape Hook Ziso Extender - Yiyun
Inotevera: 2020 nyowani yekuuya panties muviri shaper musono zvisingaonekwe vakadzi sexy butt lifter panties tummy control slimming body shaper
CUSTOM Yakakwira Elasticity Traceless Butt Lifter T ...
Fakitori yakananga kutengesa butt inosimudza inotakura maturu ...
Kukura Vakadzi Bhatani Lifter Shape Bum Inosimudza Pan ...
Amazon inopisa kutengesa kuwedzera saizi High Waist Butt Lifte ...
Kukura size Lace Trim yeBrazil Tight Butt Inosimudza P ...
Kutengesa kupisa yakakwira fashoni yakakwira chiuno chinosundira kumusoro kutakura ...